Ny tantara mahatsiravin’ny fanarahamaso faobe sy fitsikilovana ao Roandà · Global Voices teny Malagasy
Mifandona amin'ny zon'ny olompirenena hanana fiainana manokana ny teknolojia vaovao
Voadika ny 14 Aogositra 2020 12:22 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, polski, Nederlands, English, Español, Français, русский, English
Tao anatin'ny Herinandron'ny Firoboroboana Maitso 2017 tao Roandà, mpandray anjara iray manadihady momba ireo fitaovana fanorenana tsy ahitàna ‘karbôna’, sary an'ny Rwanda Green Fund tao amin'ny Flickr CC BY-ND 2.0.
Ity dia anisan'ny lahatsoratra anatin'ny UPROAR, hetsika santatra iray an'ny “Small Media” manainga ireo governemanta mba hiatrika ny fanambin'ny zo nomerika mandritra ny Universal Periodic Review (UPR).
Mijoro ambonina fitantaràna roa mifanohitra ny fanjakàna ao Roandà.
Etsy ankilany, “zaza iangaran'ny tandrefana ” i Roandà, tondroina ho ohatra mamiratra amin'ny fandrosoana ao Afrika, indrindra fa raha resaka fivoaran'ny aterineto sy ny fiovàn'ny nomerika no resahana. Nahazo dera tamin'izao tontolo izao i Roandà noho ny fitàrana be tamin'ny fandrakofany tambajotra finday, ny fandrakofana 4G nampitolagaga ary ny famokarany “smartphone” vita ao an-toerana ihany.
Etsy andaniny, mihodina taoy ny fanjakàna tsy refesimandidy manana ny fahefana faratampony, tena azo ambara ho mivangongo any amin'ny foibe. Ny antoko “Rwandan Patriotic Front (RPF)” eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia naka toerana ho toy ny hany mpiahy ny fandriampahalemana, ny fiarovana ary ny fampandrosoana, taorian'ny niainan'ny firenena tao anaty politika tetezamita tamin'ny lafiny rehetra taorian'ny fandripahana sy ny ady an-trano tamin'ny 1994, izay marobe ireo pôlitisiana, mpanao gazety, ary mpisehatra sivily no maty, nafindra toerana na nalàna baràka nandritra izany.
Entin'ny fanjakana manamarina ny fanarahamaso henjana ataony amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, ny fampanginana ireo tsy mitovy hevitra aminy, ary ny habibiana atao amin'ny mpanohitra ny resaka firaisankinam-pirenena, ny fiarovana, izay ikendrena indrindra indrindra ireo politisiàna any am-pielezana nandositra an'i Roandà mba hiaina an-tsesitany taorian'ilay ady, isan'ireny ireo mpikambana fahiny tamin'ireo hetsiky ny mpihoko nanana ny tobiny tany atsinanan'ny Repoblika Demaokratikan'i Kôngô, hatramin'ireo endrika fahiny fantabahoaka tao anatin'ny governemanta ka nandositra an'i Roandà mba hanatevina laharana ireo antoko pôlitika tany Eorôpa sy Etazonia.
Miainga avy amin'ny tantaran'ny firenena momba ireo herisetra nampisarantsaraka ny foko, nandrafitra tetipanorona be pitsopitsony entina manara-maso mavitrika sy hamotehana ireo feon'ny mpanohtra ny governemanta, tamin'ny alàlan'ny fanarahamaso ny tontolon'ny aterineto, ny fampirohorohoana ary ny herisetra — tsy hoe fotsiny tao anatin'ny faritry ny Farihy Lehibe (Great Lakes) fa koa manerana ny tany.
Nandritra ireo telo taona farany, nitarin'ny fanjakana ihany koa ireo fotodrafitrasa fanarahamaso faobe teo an-tànany, miaraka amin'ny fametrahana tsy ela akory izay ireo tambajotrana ‘camera’ CCTV manerana ireo tanàna mifanolo-bodirindrina amin'i Kigakli renivohitra.
Betsaka ireo ohatra azo raisina tamin'ny voalaza fa nanaparitahan'ny fanjakàna ireo teknolojia hamelezana ny tsy mitovy hevitra aminy sy ireo mpikambana avy amina'ny mpanohitra, araka ireo porofo hita amin'ny trangam-pitsaràna marobe izay anoloran'ny mpiampanga ny dika avy amin'ireo resaka manokana nalaina avy amin'ireo fampiasa ifampiresahana anaty finday.
Tamin'ny Septambra 2017, vaky masoandro ny porofo hoe nampiasa tety anaty aterneto ny teknolojia sy rindrambaiko hafa fijiriana ireo sampandraharaham-piarovana sy fitsikilovana, mba hanarahana ireo hetsiky ny tsy mitovy hevitra aminy sy ireo mpikambana avy amin'ny mpanohitra.
Ohatra, vao volana vitsy monja izay, taorian'ny nanambaran'ilay pôlitisiàna Diane Rwigara ny firotsahany hofidiana ho filohampirenana tamin'ny 2017, nosamborina izy, niaraka tamin'ny reniny sy ny rahavaviny, tamin'ny fampiasàna fiampangàna sandoka ho nandositra hetra ary fihaikàna olona hankahàla ny fitondrana. Nandritra ny fakàna am-bavany savaranonando, rakipeo avy tao amin'ny WhatsApp nolazaina fa azo tamin'ny finday an'i Rwagara sy ny reniny no naroson'ny fampanoavana ho porofo miampanga azy ireo. Heverina ho ny fampiasàna rindrambaiko fitsikilovana no nahafahan'ny manmpahefana nahazo ireo hafatra ireo.
Tamin'ny 2019, nisy tatitra iray fanadihadiana lalina avy amin'ny Financial Times nitondra fanazavanana misimisy kokoa momba ny fironan'ny fanjakàna mankany amin'ny fanarahamaso akaiky ny fampiasàana ireo media sôsialin'olontsotra. Naborak'ilay tatitra ny mety ho fampiasàn'ny fanjakana ny rindrambaiko fitsikilovana Pegasus, novokarin'ny orinasa Israeliàna momba ny teknolojia.
Noho ny rindrambaiko Pegasus, azon'ireo masoivohom-piarovana atao ny manangona rakitra avy any amin'ireo findain'ny olontsotra, tsy ahitàna soritra, tafiditra anatin'izany ireo antso an-telefaona, ny olona ifandraisana, ny tenimiafina ary izay rehetra angondrakitra ifandefasana amin'ny alàlan'ny WhatsApp na Skype.
Ny zo hanana fiainana manokan'ny teny dia voarakitra ao anatin'ny lalàm-panorenan'ny Repoblikan'i Roadnà, ary koa ao anatin'ny Fifanarahana Iraisampirenena mifandraika amin'ny Zo Sivily sty Pôlitika (ICCPR) izay nosoniavin'i Roandà.
Fa noho ny resaka filaminam-pirenena, ny lalàna laharana 60/2013 mifehy ny fipaingorana fifandraisana dia maniome alàlana ny fampanoavana hamoaka “baiko am-bava” ho an'ireo sampandraharaha misahana ny fiarovam-pirenena sy ny fitsikilovana mba hijery, hipaingotra ary hamboraka ireo torohay rehetra novokarina, nampitaina, azo na voatahiry any anatin'ireo solosaina rehetra.
Mbola lavidavitra kokoa hono izay, ny tsy fisian'ny lalàna manokana miaro ny angondrakitra momba ny tena manokana dia manome vahana ireo sampandraharaha roandey misahana ny fiarovana mba hanangona tsy amin'ahiahy ireo angondrakitra.
Rehefa tafahoatra loatra ny fampiasàn'ny fanjakàna ireo fitaovana fanarahamaso, tandindonin-doza daholo ny olom-pirenena tsirairay. Ankehitriny i Roandà dia tsy ampy rafitra araka ny lalàna mifanaraka tsara natao ho taridàlana amin'ny fampiasàna ireo teknolojia ety anaty aterineto, amin'ny resaka fiarovana sy filaminam-pirenena.
Tsy maintsy jeren'ny fanjakana izay fomba handrindràna ny fampiasàna sy fampiharana ireny teknolohjia vaovao ireny. Ny fanomezana alàlana dia tokony hifototra aminà porofo tsy mitanila avy aminà mpitsara iray na rafitra tsy mainkina iray araka ny lalàna. Fanampin'izay, tokony raràn'ny fanjakana ny fanangonana an-jambany ireo angondrakitra mahakasika fiainana manokan'ny tena, tsy fanomezana alàlana raha tsy aminà tranga tena tsy maintsy ilàna ny fanaovana izany.